Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir oo ka Horyimid xil ka qaadis lagu sameeyay.............................................
Posted by salaad on September 14 2018
Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir oo la hadlay KNN ayaa Waxaa uu ka horyimid Xil ka qaadis ay maanta ku sameeyeen xildhibaano ka tirsan Galmudug.
Waxaa uu sheegay in xildhibaanada ku shiray Magaalada Dhuusa Mareeb ay ahaayeen dhalin yaro aan ka mid aheyn mudanayaasha Baarlamaanka Galmudug,isagoona Sheegay in xildhibaano xiligan aysan joojin Magaalada dhuusa mareeb.
Sidoo kale Gudoomiye Cali Gacal ayaa waxaa uu sheegay in Go’aanka ay gaareen Xildhibaanada ka tirsan Galmudug uu yahay mid sharci daro ah,islamarkaana iyagu xilka ka qaadi Karin Gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxaa uu xusay in xildhibaanada ay ku xadgudbeen heshiiskii dhawaan lagu kala saxiixday dalka Jabuuti.
Maanta ayaa Magaalada Dhuusa mareeb waxaa kulan ku yeeshay xildhibaano tiradooda gaaraysa 147 mudane,iyadoona xilka ay ka qaadeen Gudoomiyaha 146 xildhibaan,halka hal mudane uu ka aamusay.
Xildhibaanada xilka ka qaaday Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir ayaa inta badan ah kuwii laga soo xulay Maamulka Ahlusuna ee lagu daray Baarlamaankii Galmudug ee lagu dhisay Magaalada Cadaado ee Gobalka Galgaduud.
Xil ka qaadista lagu sameeyay Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir ayaa waxaa ay sii hurinaysaa khilaafka u dhexeeya Madaxda ugu sareysa ee Maamulka galmudug.